Bit By Bit - Ny fandinihana ny fitondran-tena - 2.3.6 tsy filazana
Ny antontan-kevitra tsy mivaona dia ratsy ho an'ny fanoloran-tsokosoko ivelany, saingy mety ho tena ilaina amin'ny fampitahana ohatra.
Ny mpahay siansa sasantsasany dia zatra miasa miaraka amin'ny angona izay avy amin'ny santionan-javatra azo tsapain-tanana avy amin'ny mponina iray voafaritra tsara, toy ny olon-dehibe any amin'ny firenena iray manokana. Io karazana angon-drakitra io dia antsoina hoe angona ho an'ny solontenam-panjakana satria ny santionany "manondro" ny vahoaka be. Maro ny mpikaroka mandany ny angon-drakitra voatondro, ary ny sasany kosa, ny angona avy amin'ny solontenany dia mitovy amin'ny siansa henjana, fa ny angon-drakitra tsy misy famaritana kosa dia midika hoe resabe. Amin'ny toe-javatra faran'izay henjana dia toa mino ny fisalasalana sasany fa tsy misy na inona na inona azo ianarana avy amin'ireo antontam-baovao. Raha marina izany, dia toa mametra kely ny zavatra azo ianarana amin'ny loharano lehibe, satria maro amin'izy ireo no tsy mipoitra. Soa ihany, ireo sembana ireo dia ampahany kely ihany. Misy tanjona fikarohana sasantsasany izay tsy mazava tsara ny angon-drakitra tsy mipoitra, fa misy kosa ireo hafa izay mety tena ilaina tokoa.
Mba hahatakarana io fanavahana io, andeha hodinihintsika ny siantifika ara-tsiansa: ny fandinihan'i John Snow momba ny fipoahan'ny kolera 1853-54 tany Londres. Tamin'izany fotoana izany, maro ny mpitsabo nihevitra fa vokatry ny "rivotra ratsy" ny kôlera, nefa nino i Snow fa aretina mifindra izy io, ary mety hiparitaka amin'ny rano fisotro madio. Mba hitsapana io hevitra io, dia nanararaotra ny zavatra mety hiantso ny fanandramana voajanahary ankehitriny i Snow. Nampitaha ny tahan'ny kôlera amin'ny tokantrano izay orinasan'ny orinasa roa samihafa izy: Lambeth sy Southwark & ​​Vauxhall. Ireo orinasa ireo dia nanompo toy izany, saingy samy hafa tamin'ny fomba niavaka izy ireo: tamin'ny taona 1849-taona vitsy talohan'ny nanombohan'ny valanaretina-dia namindra ny tsipika nipoitra teo amin'ny làlambe maintany tany Londona i Lambeth, fa ny Southwark & ​​Vauxhall kosa dia nandao ny fantsom-pamokarana nidina avy eo tsiranoka. Raha nampitahan'i Snow ny tahan'ny fahafatesana tamin'ny kôlerà tao an-tokantranon'ireo orinasa roa, dia hitany fa in-10 isan-jato no mety maty tamin'ny kôlera ny mpanjifa ao Southwark & ​​Vauxhall - ilay orinasa izay nanome mpanjifa rano maloto. Ity vokatra ity dia manome porofo matanjaka amin'ny fijerin'ny Snow momba ny antony mahatonga ny kolera, na dia tsy mifototra amin'ny fanehoan-tena solontenan'ny olona ao Londra aza izany.
Ny antontan'isa avy amin'ireo orinasa roa ireo, na izany aza, dia tsy ho tsara loatra raha hamaly fanontaniana hafa: inona no fihanaky ny kolera any Londona nandritra ny fipoahana? Ho an'io fanontaniana faharoa io, izay zava-dehibe ihany koa, dia tsara lavitra kokoa ny fananana solontenan'ny olona avy any Londres.
Araka ny asehon'ny Snow, dia misy fanontaniana sasantsasany momba ny siansa izay mety ho mahomby tsara ny angon-drakitra ary misy ireo hafa izay tsy mifanaraka amin'izany. Fomba iray hanehoana ireo karazana fanontaniana roa ireo dia ny fanontaniana sasany momba ny fampitahana ao anaty ohatra ary ny sasany dia momba ny fanolorana ohabolana. Ity fahasamihafana ity dia azo aseho amin'ny fanadihadiana hafa momba ny epidemiolojia: Ny Fianarana Dokotera Britanika, izay nandray anjara lehibe tamin'ny fampisehoana fa miteraka homamiadana ny fifohana sigara. Ao amin'io fandalinana io, Richard Doll sy A. Bradford Hill dia nanaraka mpitsabo mpanampy miisa 25.000 nandritra ny taona maromaro ary nampitaha ny taham-pahafatesan'izy ireo noho ny habetsaky ny sigara tamin'izy nanomboka ny fianarana. Ny Doll (1954) Hill (1954) nahita fifandraisana mahery vaika teo amin'ny fihetsika: ny vahoaka be dia mifoka sigara dia mety ho faty noho ny homamiadan'ny havokavoka. Mazava ho azy fa tsy fahendrena ny maminavina ny fihanaky ny homamiadan'ny havokavoka eo amin'ny britanika rehetra mifototra amin'ireto vondrona dokotera lahy ireto, saingy ny fampitahana anatiny dia manaporofo fa ny voan'ny kanseran'ny havokavoka.
Amin'izao fotoana izao dia efa nampiseho ny fahasamihafana misy eo amin'ny fampitahana ohatra sy ny fanoloran-kevitra mivoaka tsy tapaka aho, roa ny fandikana roa. Voalohany, misy ny fanontaniana voajanahary momba ny halehiben'ny fifandraisana izay mihatra amin'ny santionan'ny dokotera britanika lahy dia hitazona ao anatin'izany ny santionan'ny dokotera vehivavy, britanika, orinasa mpanao asa tanana britanika, orana mpiasa orinasa vehivavy na antoko hafa. Ireo fanontaniana ireo dia mahaliana sy manan-danja, saingy tsy mitovy amin'ny fanontaniana mikasika ny fomba ahafahantsika manalavitra ny ohatra iray amin'ny vahoaka. Mariho, ohatra, fa mety hiahiahy ianao fa ny fifandraisana misy eo amin'ny fifohana sigara sy ny homamiadana izay hita amin'ny dokotera britanika lahy dia mety ho mitovy amin'ireo antokon'olona hafa. Ny fahafahanao manao ity fampiarahana ity dia tsy tonga amin'ny hoe ny dokotera britanika lahy dia ohatry ny probabilistic random avy amin'ny mponina rehetra; Fa, avy amin'ny fahatakarana ny rafitra izay mamela ny fifohana sigara sy ny homamiadana. Araka izany, ny fanolorana ny fanadihadiana iray avy amin'ny santionany ho an'ny mponina izay nanosika azy dia olana ara-statistika marobe, saingy ny fanontaniana mikasika ny fitaterana ny traikefa hita ao amin'ny vondrona iray ho an'ny vondrona iray hafa dia tsy olana momba ny (Pearl and Bareinboim 2014; Pearl 2015) .
Amin'izao fotoana izao, ny fisalasalana dia mety hanipika fa ny ankamaroan'ny sosialy dia mety tsy ho mora kokoa amin'ny fitaterana vondron'olona mihoatra ny fifandraisana eo amin'ny fifohana sigara sy ny homamiadana. Ary manaiky aho. Ny fiheverana izay tokony antenentsika ny modely azo ampiasaina dia fanadihadiana ara-tsiansa izay tokony hofaritana araka ny hevitra sy ny porofo. Tsy tokony hoeritreretina avy hatrany fa mety ho azo ampiasaina ny lamina, saingy tsy tokony hiheverana fa tsy ho azo ampiasaina izy ireo. Ireo fanontaniana manjavozavo mikasika ny fitaterana ny fahazoan-dàlana dia ho fantatrao raha toa ka nanaraka ny adihevitra momba ny fikarakaran'ireo mpikaroka mikasika ny fitondrantenan'olombelona amin'ny alalan'ny fianarana mpianatra mpianatra mpianatra (Sears 1986, [@henrich_most_2010] ) . Na dia eo aza izany adihevitra izany, dia tsy mety ny milaza fa tsy afaka mianatra zavatra avy amin'ny fianarana mpianatra mpianatra mpianatra ny mpikaroka.
Ny fanasitranana faharoa dia ny ankamaroan'ny mpikaroka miaraka amin'ny angon-drakitra tsy mivoatra dia tsy mitandrina toy ny Snow na Doll and Hill. Noho izany, mba hampisehoana ny zavatra mety hitranga rehefa manandrana manao fanadihadiana tsy misy famelabelarana avy amin'ireo antontan-kevitra tsy misy famoahana ireo mpikaroka, te-hilaza aminareo aho momba ny fandalinana ny fifidianana parlemantera alemà 2009 avy amin'i Andranik Tumasjan sy ireo mpiara-miasa (2010) . Tamin'ny famakafakana sioka 100.000 mahery, nahita fa ny ampahany amin'ireo sioka milaza ny antoko politika dia mifanandrify ny isan'ireo vato izay nandray anjara tamin'ny fifidianana parlemanta (sary 2.3). Raha lazaina amin'ny teny hafa dia hita fa ny angona Twitter, izay malalaka dia afaka manolo ny fanadihadian'ny mpandinika ny fomba nentim-paharazana, izay lafo be noho ny fanantitranterany ny angon-drakitra misolo tena.
Raha jerena ny zavatra efa fantatrao momba ny Twitter, tokony hanahy avy hatrany amin'ity vokatra ity ianao. Ny Alemà ao amin'ny Twitter tamin'ny taona 2009 dia tsy lasibatry ny mpifidy alemà, izay mety ho azon'ireo mpifidy alemà, ary ireo mpanohana ny antoko sasany dia mety hiresaka momba ny politika matetika kokoa noho ny mpanohana ny antoko hafa. Araka izany dia toa mahagaga fa ny mety ho fiovana rehetra mety ho azonao an-tapitrisany dia hanafoana ny fampitahana ireo tahirin-kevitra ireo mba hahafahan'ny mpifidy alemana mivantana. Raha ny marina, ny valiny ao amin'ny Tumasjan et al. (2010) dia hita fa tsara loatra raha marina. Sary iray manaraka avy amin'i Andreas Jungherr, Pascal Jürgens, sy Harald Schoen (2012) nanamarika fa ny fanadihadiana tany am-piandohana dia nanaisotra ny antoko politika izay tena naharay ny ankamaroany tao amin'ny Twitter: ny Antoko Pirate, antoko madinika izay miady amin'ny governemanta governemanta amin'ny Internet. Rehefa tafiditra tao amin'ny fanadihadiana ny Antokon'ny Pirate, ny Twitter dia nanjary fanta-daza amin'ny valim-pifidianana (sary 2.3). Araka ny asehon'ity ohatra ity, ny fampiasana loharanom-baovao tsy miangatra dia tsy mety diso. Ary koa, tokony ho hitanao fa ny tena marina dia misy sioka 100 000 tsy misy dikany: ny antontam-baovao tsy dia fantatra loatra dia mbola tsy misolo tena, lohahevitra iray izay haveriko ao amin'ny toko faha-3 rehefa miresaka momba ny fanadihadiana aho.
Sary 2.3: Ny fanehoan-kevitra Twitter dia toa mialoha ny valin'ny fifidianana alemà 2009 (Tumasjan et al. 2010) , saingy tsy misy ny antoko misy azy ireo: Ny antoko Pirate (Jungherr, Jürgens, and Schoen 2012) . Jereo ny Tumasjan et al. (2012) ho fanoherana ny fanilihana ny antoko Pirate. Nampifanarahina tamin'ny Tumasjan et al. (2010) , ny latabatra 4 sy Jungherr, Jürgens, and Schoen (2012) , ny latabatra 2.
Raha ny fehin-kevitra, loharanom-baovao maromaro no tsy mamaritra samirery avy amin'ny mponina sasantsasany voafaritra tsara. Ho an'ny fanontaniana izay mitaky ny fanamafisana ny vokatra azo avy amin'ny santionany amin'ny vahoaka izay nanosika azy, dia olana lehibe izany. Saingy ho an'ny fanontaniana mikasika ny fampitahana anatiny dia mety ho mahery vaika ny angona tsy mipoitra, raha toa ny mpikaroka dia mazava tsara momba ny toetrany sy ny filazana fanohanana momba ny fitaterana azy ireo amin'ny porofo ara-tsaina na ara-tsaina. Raha ny marina, ny fanantenako dia ny loharanom-baovao lehibe ahafahan'ny mpikaroka hanatsara bebe kokoa ny fampitahana ohatra amin'ny vondron'olona maro tsy miankina, ary ny fiheverako fa ny tombatombana avy amin'ny vondrona samihafa dia hanao bebe kokoa amin'ny fikarohana fikarohana ara-tsosialy noho ny tombanana tokana avy amin'ny random santionany.